Kuze kube manje, ukusetshenziswa kobuciko kuyathandwa kakhulu. Izinto ezihlukahlukene zisetshenziselwa ukusetshenziswa. Isibonelo, kusukela kumathayi endala amamoto okuqala kanye nokwenza izinto ezenziwe ngezandla ezenziwe ngamathayi omhlaba siqu atholakala.
Inani elikhulu lemigubho yezimoto ezingadingekile lithatha isikhala esiningi, futhi imvelo ihlupheka. Kodwa emibhedeni yemifula yama-cottage, izimbali zezimbali kanye nemiklamo eyenziwe ngamathayi kuyoba umhlobiso omuhle kakhulu. Kusuka emathayilini ungenza izindlela zensimu nezitebhisi, itanki le-septic, amanzi, amanzi, umsele. Ukugaya emhlabathini amathayi asetshenzisiwe kuyindawo enhle yokupaka amabhayisikili, imibhede yokucingo, izindawo zokudlala.
Amathayi amadala abukeka engathandeki ngokuphelele. Kodwa, ngomzamo omncane, umuntu angadala kuzo izimbali zemifino ezingavamile, okuyinto eyoba umhlobiso kunoma iyiphi ingxenye yensimu. Ngokuba ubuciko obuvela kumathayi wezwe kuzodinga ummese okhaliphile, amathini we-aerosol noma inamba yokupenda. Okwokuqala, iphethini ilandelwa ngesimo esikalini, amagagasi noma amazinyo ebusweni besondo. Khona-ke ukuma okudingekayo kunqunywe eceleni kwe-contour. Okulandelayo, ithayi idinga ukuphuma, ikamelo langaphakathi lilahliwe njengengadingekile. Uphendule isondo futhi uzomelela ummbizi wensimu, umgqa wesondo uzosebenza njengesisekelo saso. Njengoba ibonise iphutha, ingxenye engaphandle yomkhiqizo ingavezwa ngemibala enemibalabala.
Ukuze ulondoloze isikhala kuleli lizwe, amathayi angaphunywa omunye nomunye nge-protrusion encane. Lo mklamo uzoba ukuma okuhle kakhulu kwezitshalo zokuthambisa, isibonelo, ama-strawberries. Kungasetshenziswa ngisho nokufakwa efolandini endlini, uma izimo zivuma.
Ngaphezu kombhede wembali, ubuciko obenziwe ngamathayi kungaba yizinto ezihlukahlukene zezinjoloba zezinyoni nezilwane. Ijajubhi eligqamile liyizinto ezibonakalayo eziqinile futhi eziqinile. Ngakho-ke, izingcweti ezivela emgqonyeni amancane wamathayi zakha ama-slides alpine, ukuphendulela kwezingane, ama-sandboxes, ichibi legadi, inkundla yegceke, itafula elincane, izihlalo, izihlalo. Kukhona ngisho izindlu zasehlobo ezivela kumathayi. Emikhiqizweni enjalo, izinto ezilungiswayo ziyizikhonkwane, amabhotela, ucingo, izipikili, intambo, umugqa wokudoba.
Ukwenza izinto ezivela kumathayi ngendlela ye-swan, kuyadingeka ukwenza izintambo ezimbili ezilinganiselwe ngobude kancane ngaphezu kwesigamu se-circumference eceleni komkhawulo ekude kwamamentimitha amahlanu. Isika asidingi lutho. Amafomu amancane entanyeni avela engxenyeni encane yethondo, namaphiko amakhulu. Ngenxa yokuqina, isibalo ngokwawo sizogcina isimo esidingekayo. I-angle yokugoqa zonke izingxenye zenziwa ngeso, ngokusho kwesifiso sakho. Ekupheleni komsebenzi umkhiqizo udwetshwe kumbala omhlophe noma omnyama, umlomo - obomvu.
Akukho ukukhangisa okuncane okwenziwa ngamathayi ngaphakathi. Kancane kancane uthuthukise ithayi, uyiguqule ngaphakathi bese uhlanganisa isibambo, ungathola isitsha senkunkuma. Kusukela ekhamera elingadingekile uzothola i-vase eyinqaba uma uhlanganisa le nto ngendlela yombhalo P bese uyifake ngeglue ye-rubber ukuze uzinze emaphethelweni ekhamera. Kuzo zombili izingxenye ze-vase ungakwazi ukuthululela amanzi bese ubeka izimbali. Futhi uma unesifiso esincane kanye nekhono, ungenza ibhande elikhulu i jeans noma ibhulukwe, i-wristband ezandleni zakho, ama-slipper ehlobo ezinyaweni zakho, izikhwama zemfashini nesikhwama.
Izimbali zamabhodlela epulasitiki ziwuhlobiso omuhle kakhulu engadini yakho!
Mustard ukugoqa - indlela enhle kakhulu ulwe cellulite
Kanjani ukusebenzisa "The Sims 4". Qala ilayisensi futhi "pirates"